Codsiga Diarkart wuxuu ka bilaabmayaa Gaadiidka Dadweynaha | RayHaber | raillynews
HometareenkaHirgelinta Diyarkart ee Gaadiidka Dadweynaha
Hirgelinta Diyarkart ee Gaadiidka Dadweynaha
26 / 12 / 2017 tareenka, GUUD, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
Degmada Diyarbakir, magaalooyinka waaweyn ee gaadiidka dadwaynaha ee magaalada 196, 100 gaar ahaan basaska gaarka loo leeyahay iyo 376 minibus, oo ay ku jiraan wadooyinka 672 ee isla hal pool ayaa bilaabaya arjiga Diyarkart. Gadiidka Badda iyo Wasaaradda Isgaarsiinta la Diyarkart Card Turkey in loo isticmaalo in meel ka mid ah muwaadiniinta ee magaalooyinka kala duwan ka faa'iidaysan karaan gaadiidka dadweynaha. Codsiga cusub waxaa laga fulin doonaa degmooyinka ka baxsan xarunta magaalada. Nidaamka cusub, oo ah mid aad u ammaan badan oo ku haboon naafada, ayaa la bilaabi doonaa 31 Mart 2018.
Degmada Diyarbakir ee magaalomadaxda waxay ku dadaaleysaa sidii ay u bixin laheyd adeegyada gaadiidka dadweynaha ee heerarka caalamiga ah iyada oo la raacayo horumarinta tiknoolajiyada. Sanadkan 2017, degmadu waxay wadajir u sameyn doontaa wadarta 27 million 400 kun oo rakaab ah oo ku jira basaska dadweynaha iyo kuwa gaar loo leeyahay ee 2018, 2018, Degmada Metropolitan ayaa isbedel ku sameyn doonta heerarka caalamiga ah ee gaadiidka dadweynaha. Kooxaha shaqadoodu dhammeeyeen sanadka oo dhan 196, 100 adeega basaska dadweynaha, baska dadweynaha ee 376 gaar ahaan kuwa basaska gaarka loo leeyahay iyo 672 minibus waxay ka qaadi doonaan wadarta gaadiidka dadweynaha ee 31 isla goobta. Waxaa la qorsheynayaa in ay isku xiraan basaska dadweynaha iyo basaska yar yar ee gaadiidka dadweynaha ilaa Maarso 2018.
Muddada Diyartart ee gaadiidka dadweynaha
Degmada Diyarbakir ee caasimadda, oo sidoo kale aqbashay lacagaha la bixiyo, ayaa bilaabay codsiga Diarkart iyadoo ay ku jiraan basaska dadweynaha iyo basaska yar yar ee nidaamka cusub iyada oo go'aanka Xarunta Xiriirinta Gaadiidka (UK) ay tirisay taariikhda 19.10.2017 iyo 2017 / 9-9. Iyadoo hirgelinta cusub, waxaa la rajeynayaa in cirifka halista ah iyo gaadiidka gaadiidka lagu xaqiijin doono gaadiidka magaalooyinka. Si loogu daro shuruucda cusub ee basaska dadweynaha iyo basaska yar yar, software-ka nidaamka cusub iyo hawlaha kaabayaasha farsamada ayaa la qaban doonaa.
Gaadiidka dadwaynaha ee ammaanka
Diyarkart waxay dhamaystirtay shaqada mashruuca tan iyo bishii Diisembar 15 Diyarbakir, codsiga cusub ee gaadiidka dadweynaha oo dhan si looga saaro nidaamka kuraasta lacag bixinta ayaa ka gudbaya nidaamka kuraasta. Muwaadiniinta ayaa ka badbaado marka loo eego gaadiidka dadweynaha ee nidaamka cusub, kaamirooyinka amniga sare ayaa la raaci doonaa. Waxaa intaa dheer, badhanka nabdoonaanta ee dhammaan gawaarida ku jira nidaamka, isticmaalka shidaal waxtar leh, nabadgelyada rakaabka ee gawaarida iyo xadgudubyada sharciga taraafikada ayaa la kormeerayaa.
Thanks to nidaamka cusub, kooxuhu waxay awoodi doonaan inay gaaraan xog gaar ah oo ku saabsan gaadiidka dadwaynaha iyo falanqayntooda. Iyadoo la raacayo codsiga Diarkart, kormeerka la xiriira gaadiidka, go'aaminta dheelitirka dalabka dalbashada ee khadadka, falanqaynta xiriirka rakaabka iyo xiriirka wadayaasha ayaa si habeysan loo fulin doonaa.
Codsiga cusub wuxuu noqon doonaa mid dhaqaale badan
Degmooyinka Diyarbakır, magaalooyinka waawayn, codsiyo badan oo cusub ayaa lagu hirgelin doonaa nidaamka marka la eego kharashka, muwaadiniintu waxay awoodi doonaan inay isticmaalaan gaadiidka dadweynaha si dhaqaale ahaan. Iyadoo codsiga Diiqsiga Dusarkartu ku guuleysto, waxaa jiri doona qiimaha% 20 inta u dhaxaysa 100 TL iyo 10 TL, 100 inta u dhaxeysa 600 TL iyo 15 TL. 2 iyo 4 codsiga Diarkart ayaa sidoo kale lagu hirgelin doonaa xafiisyada iibinta kaararka. Iyada oo nidaamka wareejinta, 45 raacaya daqiiqadaha ugu horeeya ee 2 waxaa lagu dhimi doonaa 50%. Nidaamka cusub, kaararka deynta ayaa lagu aqbalayaa gaadiidka Diyarkart waxaana lagu siin doonaa muwaadiniinta iyaga oo isticmaalaya moobaylka (telefoonka gacanta) iyo bangiyada internetka.
Qorshaha cusub wuxuu kordhin doonaa tirada kaarka xafiisyada iibinta kaararka. Muwaadiniintu waxay baran karaan inta barkimaad ee kaararka ah marka ay rabaan.
Codsiga internetka ee bilaashka ah ayaa sii socon doona
Degmada Diyarbakir ee magaalada caasimadda ayaa sannadkii hore fulisay gaadiidka dadweynaha ee codsiyada internetka oo bilaash ah. Iyadoo la adeegsanayo nidaamka raadinta macluumaadka rakaabka, muwaadiniintu waxay awood u yeelan doonaan inay bartaan meesha basku yahay iyo sida loo gaaro joogsiga internetka iyadoo loo marayo taleefannada casriga ah.
Adeega gaadiidka dadweynaha ee maqalka iyo maqal la'aanta
Degmada Diyarbakır, oo leh qorshe gaadiid dadweyne oo cusub oo loogu talagalay digniinta gaadhiga ee baabuur la'aanta ah iyo nidaamyada tilmaamaya alaarmiga joogtada ah ee baabuurta ee gudaha dhagax la'aanta. Codsiga wuxuu kaa horjoogi doonaa wakhtiga iyo kharashka kaa lumay.
Card Turkey socon nidaamka cusub
Diyarbakır degmada Metropolitan, Diyarkart lagu daahfuri doonaa on nidaamka March 31 2018 ee Wasaaradda Gaadiidka Badda iyo Isgaarsiinta noqon doonaa socon codsiyada bilaabay guud ahaan Card Turkey. Muwaadiniintu waxay ka faa'iidi karaan gaadiidka dadwaynaha ee magaalooyinka kala duwan oo leh kaararka ay helaan.
Sanadka 2018, nidaamka kuraasta waxaa lagu hirgelin doonaa meelaha ku xiran Bismil, Cermik, Tigris, Isil, Ergani, Hani, Kulp, Lice iyo Silwan xarumaha go'aanka taariikhda 16.11.2017 iyo 2017 / 10-22 lambarka UKAA.
Waqtiga Dib-u-dhaca wuxuu bilaabmaa gaadiidka dadweynaha
Codsiga bedelka wuxuu ka bilaabmay gaadiidka dadweynaha ee Manisa
Sakarya waxay bilowday mudada baaritaanka gaadiidka dadweynaha
Xilliga Guddiga Xidhiidhka aan Xiriir lahayn wuxuu bilaabayaa Kahramanmaraş
1 Milyan Diyarkart waa bilaasheen
Dareewalka baska oo la wargeliyay
Muddada Dib u buuxinta khadka tooska ah ayaa laga bilaabay Diyarkart
Bixinta Lacagta Lacagta Loogu Jiro ee Gaadiidka Dadweynaha ee Adana
Motas wuxuu bilaabaa Arjiga Xagaaga ee Gaadiidka Guud
Baska Dadweynaha ee Gaarka ah
ururinta qashinka elektarooniga ah
Odaygaygu waa dareen! Goobta kirismaska ​​ee nidaamka cusub ee taraafigga
Ka qaybgalay Ankarakart oo ku taal Başkentray